जान्नुहाेस् बच्चाकाे ओठमा चुम्बन गर्दा बच्चाकाे स्वास्थ्यमा आउन सक्छ यस्ताे समस्या - ज्ञानविज्ञान
साना साना केटाकेटी देखेपछि सबैमे मन पराउछन । मायाले हामीले चुम्बन गर्ने गर्छौं । पहिले सामान्यतय बच्चाको गालामा चुम्बन गर्ने गरिन्थ्यो भने, अहिले बालबालिकाको ओठमा चुम्बन गर्ने चलन बढ्दो छ ।
तर तपाईंले यदि आफ्नो बच्चाको ओठमा चुम्बन गर्नुहुन्छ वा अरुलाई चुम्बन गर्न स्वीकृति दिनुहुन्छ भने तपाईंले बच्चाको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै हुनुहुन्छ ।
सन् २००१ मा एक जना ब्रिटिश महिलाले आफ्नो शिशुको तस्बिर सामाजिक संजालमा राखेकी थिइन्। उक्त तस्बिरमा उनको बच्चाको मुख र अनुहारमा भयावह संक्रमण देखिन्थ्यो। उनका अनुसार एक जना महिलाले बच्चाको ओठमा चुम्बन गरेकी थिइन्।
उक्त चुम्बनको माध्यमले ती महिलामा भएको हर्प्स सिम्प्लेक्स भाइरस बच्चामा सरेको थियो, जसले गर्दा बच्चा त्यो स्थितिमा पुगेको थियो। उक्त भाइरस आफूमा भएको बारे महिला आफै अनभिज्ञ थिइन् ।
त्यस्तै २०१३ मा आफ्नै बाबुको चुम्बनले गर्दा बच्चामा संक्रमण भएको थियो। ती बच्चाको विभिन्न अंगहरुमा संक्रमण भएको थियो। उनका बाबुमा हर्प्स सिम्प्लेक्स भाइरस भएको पत्ता लागेको थियो ।
जन्डिस के हो ? जन्डिस कसरी हुन्छ ? जन्डिस हुँदा के खाने के नखाने ?
कमलपित्त या जन्डिस कलेजोसम्बन्धी रोग हो । खाना पचाउन सहयोग गर्ने कलेजोमा प्रदूषित खानपान, फोहोर पानी र अत्याधिक मद्यपानले असर गर्छ । जसका कारण जन्डिसको संक्रमण वढी हुन्छ ।
जन्डिस एउटा लक्षण हो, जो शरीरको विभिन्न भागमा पहेँलोपनको रुपमा देखा पर्दछ । जण्डिस आफैँमा रोग होइन, यो कुनै रोगको कारण हो । पहेँलोपनको जण्डिस असामान्य अवस्था हो तर बिरामीले जण्डिसलाई नै रोग भन्ने गरेका छन् ।
१, पेयपदार्थहरू :पानी, ग्लुकोज पानी, मिश्री पानी प्रशस्त मात्रामा खाने उखु मौसम सुन्तला आदिको जुस खाने।
२, फलफूलहरू : उखु, मेवा, स्याउ, सुन्तला, नासपती, कलिला काँक्राहरू, नरिवलको पानी, खरबुजा, तरबुजा, गाँजर, मुला, प्रशस्त खाने ।
३, मसलाहरू : सिधेनुन, जिरा, धनिया, अदुवा, लसुन, प्याज, बेसार, जन्डिस कम हुँदै गएको अवस्थामा मात्र थोरै
४, सब्जीहरू : रायोको साग, काउली, बन्दा, फर्सीको मुन्टा, सिमी, तितेकरेला, लौका, स्कुस, आलु, च्याउ, फर्सी हरियो र पाकेको चम्सुर, पालुंगो, मेथीको साग, सिधेनुन जिरा हालेर उसिनेको तरकारी खान हुन्छ । जिउ चिलाउन थालेमा भने नुन नखानु राम्रो हुन्छ ।
५, रहरको दाल, मुँगको दाल, पाउरोटी –क्रिम नभएको, बिस्कुट, दूध डेरीको मात्र
६, जन्डिस भएको अवस्थामा जतिसक्यो आराम गर्नुपर्छ ।
७, रोग लाग्नेबित्तिकै आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
१, सब्जीहरू : तोरीको साग, सुपको साग
२, फलफूलहरू : आँप, केरा, अंगुर, लिची, अनार, अम्बा
३, मसलाहरू : चिल्लो पदार्थहरू, खुर्सानी, काजु, बदाम, छोकडा, तिल,
४, पेय पदार्थहरू : दही, मोही, फ्रिजमा राखेको कोक फेन्टा पेप्सीलगायतका चिसो पेय तथा चिया, कफी तथा अत्कोहलजन्य पेय पदार्थ
पायल्स रोग के हो? जान्नुहोस् यसका लक्षण तथा बच्ने उपायहरु..
पायल्स रोग यस्तो रोग हो । जुन मलद्धारसँग सम्बन्धित रोग हो । मानवहरुको जीवनशैली र खानपीनको कारणले गर्दा धेरैलाई अहिलेको समयमा लाग्ने रोग हो । यसमध्ये पायल्स रोग सबै मानिसहरुको समस्या भएको देखिन्छ । लजालुपनको कारण धेरै मानिसहरुले पायल्स रोग सम्बन्धी खुलेर परिवारसँग कुरा गर्दैनन् ।
अझ कसैलाई त पायल्स रोग के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन । यसको लक्षण भनेको मलद्वारमा मासु सुन्निने, चिलाउन, पलाउने, दुख्ने, दिसा गर्दा रगत आउने गर्दछ । पायल्स रोगीमध्ये कसैको अंगुरकोे झुप्पोजस्तो पलाएको हुन्छ र रातो सुन्निएको डल्ला पीप बग्छ । यो रोग लाग्दा कसैलाई रगत आउँछ भने कसैलाई आउँदैन ।
यो राग लाग्ने मुख्य कारण जीवनगति र खानपान हो । अनियमित खानपान, व्यायामको कमि, चिया बदि पिउने, पानी कम खाने, धेरै व्रत बस्ने, हरियो सागपात नखाने, माछामासु तथा सुख्खा खानेकुरा जस्तै चाउचाउ, बिस्कुट, चाउमिन बढि खाने, अनिन्द्रा, धेरै तनाव लिने, रक्सी, चुरोट, सूर्तीको अत्यधिक प्रयोग कलेजोको खराबी, तथा भुटेतारेका कुरा बढी खाने गर्नाले पायल्स तथा दिसाबाट रगत आउने र मासु पलाउनेजस्ता समस्या बढी हुन्छ ।
नियमित दिसा नहुनु, दिसा तथा पाद रोक्नु, दिसा कब्जियत, वा दिसा थोरै आउनु, दिसा पिसाब लागेको बेलामा नगर्नु, चिल्लो तथा तेलको प्रयोग बढी हुनु पनि यसको कारण हो । शरीरलाई आवश्यकभन्दा बढी खानु, तथा जीवनशैली एकनासको नभएका कारण पायल्स हुन्छ ।
२.पायल्स हुँदा खानुपर्ने खानेकुराहरुः
गहुको पिठो, रोटी, फलफुल, हरियो सागपात काँचै खाने, ब्राउन राइस, रहर तथा मुगको दाल खाने, पानी प्रशस्त पिउने, खाना खाँदा मुला, काँक्रो, गाँजर खाने । यी यस्ता खानेकुरा नियमित खाने गरेमा रोगीहरुलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
३.पायल्स रोगीले गर्न नहुने र खान नहुने कुराहरुः
माछामासु, बासी खानेकुरा, चना, भन्टा, आलु, बोतलबन्द खानेकुराहरु, पूरानो अचार, रेडिमेड खानेकुरा, चियाकफी, अदुवा, मासको दाल, पिरो, अमिलो, चिल्लो तथा मसला बढी भएको, चुरोट रक्सीजस्ता चिज उपभोग नगर्ने, स्त्री सम्भोग कम गर्ने, खाली पेट नबस्ने, बिहान धेरै बेलासम्म नसुत्नेलगायतका कुरामा ध्यान दिने । यी उपायहरु अपनायो भने लागिसकेको रोग पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
पायल्स रोगीले हप्तामा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार पेट सफा गराउने, पेट हल्का राखी उपचार गर्नु एकदम राम्रो विधि हो । एकदम हल्का र कम खाने, शरीरले पचाउन सक्ने गरी खानुपर्छ । हप्तामा दुई तीनदिन शुरुमा रोग बढेको अवस्थामा एकदिन बिराएर फलफूलको रस वा पानीमात्र खाएर बस्नुपर्छ।
डाक्टरको सल्लाहअनुसार केही राम्रो भएपछि बिस्तारै काँचै खानेकुरा खाएर बस्ने, पेटलाई हलुंगो बनाएर औषधि गर्दै जाने। यस्तै, पिपलको बोक्रा मसिनो बनाएर सुकाएर पिस्ने, शुद्ध तोरीको तेलमा मिसाएर नियमित बिहानबेलुकी मासु बढेको ठाउमा एकदेखि तीन महिनासम लगाएमा पलाएको मासु बिस्तारै सुक्दै जान्छ र पायल्स पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
फिटकिरी एक टुक्रा दश लिटर मनतातो पानीमा राखेर बस्ने । एक गिलास गाइको दुधमा आधा कागती निचोरेर तुरुन्त खाँदा रगत तथा पिप आउने जस्ता समस्या ठीक हुन्छ । दुबोको २ चम्चा रस घोलेर बिहान बेलुका एक गिलास मनतातो पानीसंग खाने र नरिवलको बाहिरको जटा डढाएर एक चिम्टी खरानी।
मुलाको बिउ कुटेर तोरीको तेलमा फिटेर दिसा गरिसकेपछि लगाउने गर्ने । आफ्नो पिसाबले गद्द्वार धुने । नियमित रुपमा व्यायाम गर्दा पनि सन्चो हुन्छ । औषधि उपचारबाट निको हुन केही समय लाग्न सक्छ । शल्यक्रिया पनि अन्तिम उपचार भने होइन। कहिलकोही शल्यक्रियापछि पनि समस्या बल्झिएको र निको नभएको पाइन्छ ।
Don't Miss it विषादीयुक्त फलफुल तथा तरकारीबाट कसरी बच्ने ? जान्नुहाेस् यस्ता छन् बच्ने उपाय
Up Next बिहानै ताताे पानीमा थाेरै नुन राखेर पिउनुका यस्ता छन् फाइदा जान्नुहाेस्